चितवन मेडिकल कलेजले शुल्क समायोजन गर्ने - १५ कार्तिक २०७६, NepalTimes
१५, कात्तिक, चितवन । विद्यार्थीहरुबाट बढी शुल्क लिएको स्वीकार गर्दै चितवन मेडिकल कलेजले शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
कलेजले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो । सरकारले तोकिदिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरका थिए । बढी लिएको रकम फिर्ता वा कलेजको शुल्कमा समायोजना हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।
असोज ४ मा एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने र शुल्क फिर्ता वा समायोजन कसकसलाई कति गर्ने भनेर रिर्पोट दिन समिति बनाउने सहित पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । यो सहमतिसँगै आन्दोलन रोकिएको थियो । तर समितिले हालसम्म प्रतिवेदन तयार गरेको छैन ।
समितिले प्रतिवेदन नदिए पनि आफूहरुले गत शैक्षिक सत्रमा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने कलेजका अध्यक्ष एवम् प्रवन्ध निर्देशक डा. हरिस न्यौपानेले बताए । बढी लिइएको शुल्कलाई दोस्रो बर्षमा समायोजन गरिने कलेजका प्रवन्ध निर्देशक डा. न्यौपानेले जानकारी दिए ।
यसरी समायोजन गरिने शुल्क सरकारले राजधानीबाहिरका लागि तोकेको शिक्षण शुल्क ४२ लाख ४५ हजार, त्रि.वि. रजिष्ट्रेशन शुल्क ५००, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने परीक्षा शुल्क २५००, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता शुल्क, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, इन्टर्न्सिप शुल्क, आन्तरिक परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क र खाना बाहेक मात्रै हुने कलेज प्रशासनले बताएको छ ।